रोचक - KHASOKHAS
कोही यात्रु चाहन्नन् जहाजको बीचको सिट, यस्तो छ नयाँ डिजाइन
जहाजमा यात्रा गर्दा प्राय सबै यात्रुहरु बीचको सिटमा बसेर यात्रा गर्न चाहन्नन् । तर पनि बीचको सिटमा दायाँ र बायाँका यात्रुहरुबाट च्यापिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता भने छँदैछ । बीचको सिटलाई जहाजमा सबैभन्दा असजिलो मानिन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर जहाजका सिटमा नयाँ डिजाइन ल्याइएको छ । नयाँ डिजाइनका कारण यात्रुहरुले बीचको सिट रोज्नेमात्र नभई यात्रा …
हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको मध्य प्रदेशमा एक आश्चर्य जनक घटना सार्वजनिक भएको छ । मध्ये प्रदेशको छतरपुरका एक स्थानीयको पेटबाट विभिन्न प्रकार चिजहरु निकालिएको छ, जसले केवल अपरेशनमा खटिएका डाक्टरहरु मात्रै होइनन्, दुनियाका सबैलाई आश्चर्यचकित बनाउँछ । अपरेशनबाट एक ब्यक्तिको पेटबाट प्लास्टिकको पेन, बोरा सिलाउन प्रयोग गरिने सियो, ब्लेड, फलामको काँटी, लेदरमा विभिन्न सामानलगाएत ३३ …
आज विश्व एमोजी दिवस ✋, तपाईको मनपर्ने कुन हो 💗 ?
आज विश्व एमोजी दिवस । अहिलेसम्म झण्डै ३ हजार एमोजीहरु प्रचलनमा रहेका छन् । एमोजी भाषा त होइन तर कहिलेकाँहीले भाषाले व्यक्त गर्न नसकेका कुराहरु एमोजीले व्यक्त गर्छ । तपाईलाई जसरी मन पर्छ त्यसरी नै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ एमोजी । तलपट्टी फर्केको अनुहार 🙃 मुर्खपन व्यक्त गर्न प्रयोग गरिन्छ । तर यो संकट🙃 , हताष 🙃 र व्यंग्य 🙃 का बेला …
विश्वभर विभिन्न प्राचिन संग्रहालय निर्माण भएका छन् । तर, चीनकी एक युवतीले अनौठो संग्रहालय खोलेकी छन्, जसको नाम घाइते मुटुहरुको संग्राहलय राखिएको छ । हालै चीनमा २५ वर्षिया लियु यान नामकी युवतीले म्युजियम अफ ब्रोकन रिलेसनशीप अर्थात् टुटेको सम्बन्धको संग्राहलय खोलेकी छन् । यो संग्राहलयमा प्रेमी प्रेमिकाहरुसँग सम्बन्धित अनौठा सरसामानहरु राखिएको छ । हेइलोंगजियांग प्रान्तस्थित …
लण्डनको ट्रेनमा राखिएको नेपाल भ्रमण बर्षको विज्ञापनमा थाइल्याण्डको फोटो !
लण्डनको ट्रेन स्टेशनमा नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० को प्रचारमा केही विज्ञापनहरु राखिएको थियो, जसमा नेपाल झल्काउने केही पोष्टरहरु राखिएका थिए । पोष्टरहरुमा नेपालका हिमालहरु, मन्दिरहरु, भिक्षुहरु देखाइएको थियो । त्यतीसम्म त ठीकै छ । तर त्यसरी राखिएको एउटा पोष्टरमा थाइल्याण्डको फोटो देखाइएको छ । जसका सामाजिक संजालहरुमा चर्को विरोध भएको छ । पूर्व शेरामिक प्रशिक्षक …
गत साता विनाटिकट विमानको ल्याण्डिङ गियरमा लुकेर यात्रा गरेका एकजना केन्याका नागरिकको शब लण्डनको आकाशमा उडिरहेको विमानको ल्याण्डिङ गियरबाट भुईमा खस्यो । लण्डनको हिथ्रो विमानस्थलमा अवतरण हुँदै गरेको केन्या एयरलाइन्सको विमानबाट उक्त शव खसेको थियो । पछि विमानमा चेक गर्दा ल्याण्डिङ गियरमा उक्त व्यक्तिले राखेको खाना र पानी समेत भेटिएको थियो । जोन बाल्डोक यो …
नेपाल टेलिभिजन लोकप्रिय तर हास्य श्रृंखलाहरु हेर्नका लागिमात्र
नेपाल टेलिभिजन दर्शकहरुले हास्य श्रृंखलाहरु हेर्नका लागिमात्र बढी हेर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपाल नामक संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरु धेरै रहेको तर धेरैले हास्य श्रृंखलाहरुमात्र हेर्ने गरेको पाइएको छ । ‘नेपाली मिडिया सर्भे–२०१९’ ले नेपालमा ६० प्रतिशत टेलिभिजनका दर्शकमध्ये नेपाल टेलिभिजन हेर्ने दर्शकको सङ्ख्या २९ प्रतिशत रहेको छ । …
तीनबर्षदेखि हराएका पति टिकटकमा भेटिए
एकजना भारतीय महिलाले झण्डै तीनबर्षदेखि हराएका आफ्ना पतिलाई टिकटकमा भेटाएकी छिन् । सन् २०१६ देखि हराइरहेका उनका पति एकजना तेश्रोलिंगी महिलासंग सम्बन्धमा थिए । महिलाका आफन्तहरुले उनका पतिलाई सुरुमा एकजना तेश्रो लिंगी महिलासँग टिकटकमा फेला पारेका थिए । प्रहरीको सहयोगमा पतिलाई खोजेर पत्नीसँग पुनर्मिलन गराइएको छ । तमिल नाडुका सुरेशलाई खोज्नका लागि प्रहरीले त्यसक्षेत्रको तेश्रो …
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्यागुताको कथा सुनाउँदै डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई व्यंग्य गरेपछि भट्टराईले पनि त्यसको जवाफ कथामार्फत नै दिएका छन् । ओलीले बाबुरामलाई व्यंग्य गर्न यस्तो कथा हालेका थिए । ‘एउटा भ्यागुताको बच्ची घुम्न गइछ । बाच्छो देखिछ । आएर आमालाई भनिछ यति ठूलो जनावर देखें । हुन त बाच्छै थियो तर देखिराखेको आमाभन्दा अझ …
पत्रकार महासंघको महिला भेलामा न महिला पत्रकारलाई मञ्च, न आसनग्रहण
नेपाल पत्रकार महासंघ १ नम्बर प्रदेशको पत्रकार महिलाको प्रादेशिक भेलामा अचम्मको दृश्य देखियो । ब्यानरमा लेखिएको थियो पत्रकार महिलाको प्रादेशिक भेला । तर महिला पत्रकारलाई न त मञ्चमा राखिएको थियो न त आसनग्रहण नै गराइयो । कार्यक्रममा महिला समिति संयोजक स्मीता निरौला पनि पुगेकी थिइन् । तर उनको नाम समेत लिइएन कार्यक्रममा । कार्यक्रमको सभापति, …
भूकम्पका नाममा संकलित रकम विद्यालय पुननिर्माणमा लगाउन शिक्षामन्त्रीको आब्हान
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भूकम्पका नाममा विदेशमा संकलन भएको र..
अर्घाखाँचीका कदमहिम मियाँ र श्रीमती छली मियाँ पहिलोपटक इस्लाम धर्मका प्रवत्र्तक मोहम्मद..
विगत १२ दिनदेखि धर्नामा बसेका अस्थायी शिक्षक आन्दोलन परिचालन समितिले आफुहरुको माग पुरा..
राजमार्गमा स्थापना भएका बुद्धका मूर्ति अज्ञात समूहले तोडफोड गरी क्षति पु-याएको छ..